Firefox Hack: ကျွန်ုပ်၏ Blog ကို Keymarks သုံး၍ ရှာဖွေပါ Martech Zone
Firefox Hack: ကျွန်ုပ်၏ Blog ကို Keymarks သုံး၍ ရှာဖွေပါ
အင်္ဂါနေ့, ဇန်နဝါရီလ 23, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Net Monkey မှ Matt သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုစဉ်းစားမိသည်။ သူက Firefox ၏ built-in keymarks လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သုံး၍ စကားလုံးတစ်လုံးရှာနေသည်။ သင်ဤအရာကိုသင်အသုံးပြုခဲ့လျှင်မသေချာသော်လည်း၎င်းသည်အစဉ်အဆက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ Firefox တွင်ထည့်သွင်းထားသောအချက်များမှာအောက်ပါသော့ချက်များဖြစ်သည်။
dict - အဘိဓါန်အဘိဓာန်ကိုကြည့်ပါ
quote - ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှု: အစုရှယ်ယာများ - အော်ပရေတာ
wp - ဝီကီပီးဒီးယား
Enter ကိုနှိပ်ပါ။ ကောင်းပြီဟမ်? ဒါ့အပြင် Firefox မှာကိုယ်ပိုင် keymarks တွေရေးနိူင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဘယ်လို:
Bookmarks> Organize Bookmarks သို့သွားပါ
Quick Searches ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး New Bookmark ကိုရွေးပါ
Up သည်သင်၏တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုရောက်လာပြီးသင်နှင့်အစားထိုး string အဖြစ်% s ဖြင့်သင်ဖြည့်နိုင်သည်။
ပြီးတော့“ feedburner” အတွက်ကျွန်တော့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာရဲ့ရှာဖွေမှုရလဒ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီဟာကိုသင်အသုံးပြုနိူင်တဲ့နည်းလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်…ကုဒ်ရှာဖွေမှုများ၊ နည်းပညာရှာဖွေမှုများ၊ အလက်ဇန်းဒါရှာဖွေမှုများ…သင်၌ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာအားလုံးကိုသာစဉ်းစားပါ။
UPDATE - ဤတွင်ထပ်ထည့်ရန် ပို၍ အေးမြသောသော့ချက်များရှိသည်။
တည်နေရာ - http://dictionary.reference.com/browse/%s
သော့ချက်စာလုံး - thes
တည်နေရာ - http://maps.google.com/maps?q=%s
Java အတွက်ဂူဂဲလ် Codesearch
23:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 27
သန့်ရှင်းသော moly အသုံးဝင်မယ့်!
23:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 33
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Sterling! ငါမူရင်းပို့စ်တွင်ထပ်မံထည့်သွင်းထားသည်
ဇန်နဝါရီ 24, 2007 မှာ 2: 02 AM